5 siyaabood oo aad ugu ekaan karto wicitaanka fiidiyowga | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/5 siyaabood oo aad ugu ekaan karto wacitaanka fiidiyowga
5 siyaabood oo aad ugu ekaan karto wacitaanka fiidiyowga
Haddi aad ka shaqaynayso guriga, aad saaxiibada kula qaadanayso kooxda FaceTime, ama aad ka qayb galayso munaasabadaha meel fog, waxa laga yaabaa in aad isticmaalayso wicida fiidyaha in ka badan intii aad waligaa hore u isticmaali jirtay. In kasta oo aad u badan tahay inaad ku dadaalayso inaad naftaada si fiican ugu soo bandhigto goobta hilibka ee nolosha dhabta ah, Skype, Zoom ama FaceTime, waxaan kugula talinayaa inaad u muuqato mid cabsi leh.
Ha ka baqin. Maanta waxaan arki doonaa shan siyaabood oo lagu hubiyo inaad u muuqato weyn wicitaan muuqaal ah.
Talooyin wicitaan fiidiyow
Haddii aad isticmaalayso Zoom-ka shakiga yar ama mid ka mid ah adeegyada kale ee aan ku talineyno, talooyinkan wadaagga fiidyaha ayaa kaa dhigi doona mid wanaagsan.
Adeeg kasta oo aad isticmaasho, tilmaantan iyo kan ku xiga ee liiska - xagasha kamarada - ayaa ah kuwa ugu muhiimsan si loo saxo. Waxaad u baahan tahay inaad iftiin ka hesho wejigaaga. Taas macnaheedu waa inaadan ku fadhiisan karin daaqad ama laambad gadaashaada, sababtoo ah waxaad ku dambayn doontaa sidii silhouette. Laakin midna ma rabtid inaad kaliya ku tababarto iftiinka wejigaaga qalafsan ee murugsan.
Fikrad ahaan, waxaad rabtaa il weyn oo jilicsan oo iftiin leh. Haddii aad sheekeysaneyso inta lagu jiro dharaarnimada, waxaa laga yaabaa inaad ka faa'ideysato iftiinka jilicsan ee qumman adiga oo fadhiya daaqad u dhow. Dhig kombayutarka/iPad/iPhone tarabuunka oo dariishada ka danbeyso waad fiicantahay. Waxaad ka faa'iidaysan doontaa qurux, iftiin jilicsan - oo aan lahayn silhouettes. Haddii qorraxdu si toos ah uga iftiimayso daaqadda, ku sawir daah cirro leh ama soo laallaad xaashi cad oo khafiif ah.
Haddii ay bannaanka madaw tahay, isku day inaad laambad jilicsan gadaasha qalabkaaga dhigto si ay ku siiso dhalaal diiran.
Hel xagal kamarad wanaagsan
Hadda oo iftiinkaaga la kala soocay, waxaad u baahan tahay inaad kaameradaas kor u qaaddo heerka indhaha. Haddii kale, asxaabtaada shirarka fiidyowga ah waxay eegayaan sankaaga. Xagasha xun waxay sidoo kale qalloocin doontaa wejigaaga, adoo xoogga saaraya garka inta ay foodda iyo indhahaagu soo noqonayaan.
Si aad u heshid xagasha saxda ah, dhig qalabkaaga meel istaag. Xataa buugaag badan ayaa shaqayn doona. Haddii kale, waxaad hoos u dhigi kartaa kursiga. Ilaa aad ku jirto wicitaan caadi ah mooyaane, gacanta ha ku qaban kombayutarkaga ama qalabka gacanta. Gariirku wuxuu aad uga cadhaysiin doonaa dadka ku soo wacay.
Haddii aad ku jirto wicitaan shaqo, hubi inaad leedahay asal nadiif ah oo wanaagsan. Uma baahna inuu noqdo gidaar maran, laakiin sidoo kale waa inuu noqdaa maro-qallajinta dharkaaga ama raso weel aan la dhaqin. Haddii aad awooddo, dooro boos leh asal dhexdhexaad ah oo xiiso leh. Shelefyada buugaagta ayaa wanaagsan (ka dib markii ay ka saareen dhammaan Dan Brown iyo 50 Sawiro buugaag). Daaqaddu si fiican ayey u shaqeysaa, ilaa inta aad sidoo kale iftiin fiican ka leedahay wejigaaga. Kaliya u fiirso. Ma jiro wax mashquuliya ama ceeb ah.
Markii aan baarayay qoraalkan, waxaan la tashaday stylist xirfadle ah. Waxay sheegtay in lipstick si fiican loo jeexjeexo ay ka soo baxayso waji cirro leh oo ku yaal kamarada. Si la mid ah isqurxinta TV-ga, laakiin sida iska cad in ay ka yar tahay culeyska, xoogaa lippy ah ayaa sameyn kara yaabab. Taladani waxay u badan tahay dumarka. Mudanayaashu dabcan qaar way dharbaaxi karaan, laakiin waa inay tixgeliyaan fikradaha qofka (dadka) ay u yeedhayaan.
Waxaad ka shaqaynaysaa guriga, markaa waa inaadan xidhan suudh - xitaa markaad wacdo shaqada. La-taliyahayga stylist ayaa sheegay in mid ka mid ah waa in aan labisan aad u badan, sida aad u ekaan kartaa mid aad u quus ah si ay u bixiyaan aragti wanaagsan. Dabcan, taasi waxay ku dhamaanaysaa inay raad xun ku reebto dadka ku soo wacay. Weli, bajamamada waxay u badan tahay inay weli yihiin kuwo caadi ah, xitaa wada-sheekeysiga qoyska. Hiigso wax raaxo leh laakiin weli la arki karo. Shaadh furan ama shaati-furan ayaa fiican. Funaanad Christmas-ka aad ugu jeceshahay maaha.
Talada gunnada: U hel tayada maqalka wanaagsan ee wicitaannada fiidiyowga
Hadda oo aad u muuqato sida ugu fiican, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hubiso inaad u egtahay sida ugu fiican.
Sida xeeladaha SEO iyo PPC ay u wada shaqayn karaan si ay u wadaan yoolalka ganacsiga
Sababta shabakadaha ay luminayaan taraafikada qiimaha leh ee Google